Gabaygii Jiib Absame – Rasaasa News
Oct 3, 2009 Kismayo, somalia
Waxaanu halkan maanta ku soo qaadanay gabaygii Jiib Absame, oo aan jeclahay in qaar idinka mid ahi ay hore u dhagaysteen. Gabaygan Jiib Absame waxaa uu ka hadlayaa waaqica dhabta ah ee ka jira dhulka Waamo iyo dadka degan oo dhibaatadii Somali ka dhacday ay si gaar ah u taabatay.
Dhibaatada ka jirta Somali, waxaa Aabe u ah dhul xooga ay samaynayaan qaar ka mid ah beelaha Somalida oo doonaya in ay helaan dagaano ka khayraad badan dhulkii ay hore u deganaayeen.
Waamo waxaa ay ka mid tahay meelaha ugu nolol wanaagsan dhulka Somalida, waxaana degan dadka dad neceb colaada. Sidaas daraadeed ayaa waxaa soo kor dagay beelo ka mid ah beelaha Somalida ugu caydhsan uguna colaada jecel.
Waxaa arintaas ka dhiidhiyey dad ka yimid degaano kale oo la dhashay dadkaas martina ku ahaa halkaas, colaada Somaliya dhamaan mayso ilaa ay ummada Somalidu Ogolaato xaqa lahaanshaha dhulka [land ownership rights].
Somalidu waagii hore wadaadka laguma tirin jirin raga, haweenkana laguma tirin jirin ee waxaa loo yaqaanay magaca wadaad oo ah “Amaan” lama dilo waxna ma dilo.
Maanta Somaliya waxaa ka jira dabeecado aan hore uga jiri jirin, oo soo kordhay wadaad wax dhacay, wadaad xaajo qaadaya, waana waxa ugu badan ee qulubka keenaya.Labad wiil ee wada dhalatay ayaa uu midba wax profession u lahaa oo lagu ixtiraami jiray sida ay gabadh Somaliyeed u tidhi “waxaa ila dhalatay labo wiil iyo wadaad” waana lagu ixtiraami jiray shaqada ruuxa.
Sidaas si la mid ah ayey beelaha Somaliduna waxay kala lahaayeen shaqooyin [Profession], lagu ixtiraamo oo aan lagu xad gudbin, bal waxaa ila dheehataan tuducdan gabayga ah ” Salaada aan dayno maaraha aan sifayno Subeerka coloobay sidiisa aan yeelo” Maxamed Cali Kaariye, dheeho gabaygan kale oo lid ku ah kan hore ” Doolaabta laanqayrtu waa dab ay ku jiideene ku dareera reer diini bay dalab ka fooftaaye” waxaa laga hayaa tixdan Jafaa Raage.
Runtu waxay tahay dhibaatada maanta ee Somalida meesha ay doonto ha joogtee waa diidmada ay dadku ka xishoonayaan ama ay u arkayaan in ay shaqadoodu liidato una hanqal taago shaqada kuwo kale.